यी ५ राशीका भएका मानिसहरुले कहिल्यै मान्दैनन् हार – Sanchar Patrika
July 15, 2020 230
कुम्भ: कुम्भ राशि भएका मानिसहरू मेहनती हुने भएका कारण अत्यन्त महत्वकांक्षी हुन्छन्। उनीहरूसँग थुप्रै सपनाहरू हुन्छन्, जसलाई पूरा गर्न कडा मेहनत गर्छन्। कडा परिश्रमको कारण यस्ता व्यक्तिहरुले आफ्नो इच्छाहरु पुरा गर्न सक्छन ।
कर्कट: कर्कट राशि भएका मानिसहरु हेर्दा धेरै मेहेनती देखिदैनन्, तर यिनीहरुमा आफ्नो कामको नतिजा खोज्ने बानी हुन्छ। यस कारण उनीहरु कुनै पनि कामको जिम्मा लिन्छन् भने त्यसलाई पूरा गर्न कुनै कमि राख्दैनन्। र तबसम्म त्यो काममा लागि रहन्छन् जबसम्म त्यो पूरा हुदैन।
Prevमोदीले बुद्ध भारतका हुन् भन्दा ग’लत नहुने, ओलीले राम नेपालका हुन् भन्दा ग’लत हुने ?
Nextयी हुन् सबैभन्दा अभागी पुरुष, कहिल्यै खुसी र सुखी बन्न सक्दैनन् !
प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षअघि भनेका थिए २०७४ साउन १ पछि तुइन देखिए फोटो खिचेर सिंहदरबार ल्याउनू।
रं;गभे;दको आ;रोप लगाउँदै नेयमारले भने, ‘त्यसलाई मुखमा नहि;र्काएकोमा मलाई पछुतो छ’